I-CNC Machining Service / Thola i-Online CNC Quote / Metal & Plastic - I-Createproto Tech Co., Ltd.
Ukukhiqizwa Kwezinga Eliphansi
Kungani Dala isithombe
INKONZO / CNC Machining
Thola insizakalo yemishini ye-CNC efanelekayo yezingxenye zakho zepulasitiki nezensimbi, bese ukhiqiza futhi uhambise okufunwayo.
Okufushane ngeComputer Numerical Control, i-CNC yindlela ezenzakalelayo yamathuluzi emishini esebenzisa amakhompyutha asebenzisa isoftware ehlelwe ngaphambilini enquma ukunyakaza. Imishini ye-CNC ilungele izingxenye zokwezifiso ezizodwa futhi itholakala ekusetshenzisweni kwemishini cishe kunoma iyiphi into evimba ngqo ngokuya ngemininingwane yakho ye-3D CAD.
I-CreateProto inikeza i-CNC milling, i-CNC turning, imishini kanye nokuthinta izinto ezahlukahlukene, ezinjengemishini yensimbi noma ipulasitiki ye-CNC. Imishini ye-CNC esheshayo-esebenza kahle isebenza kangcono ekuhloleni okusheshayo, ukwakha nokulinganisa ukuhlolwa, ama-jigs nokulungiswa, nezinto zokusebenza zezinhlelo zokusebenza zokuphela.
CNC Prototype Machining Services eChina
I-CNC prototyping esheshayo isetshenziselwa ukudala ama-prototypes epulasitiki kanye ne-prototypes yensimbi, evumela ithimba lakho lokuklama ukuthi lilingise eduze ukuvela komkhiqizo wokugcina nomsebenzi, futhi kukhombise ukuba semthethweni kobukhulu bomzimba kanye nomsebenzi wokuhlangana obulula noma obunzima, kepha nokho unikeze isikhala shintsha futhi uthuthukise ukwakheka.
Ngemishini yokugaya eyenziwe ngokwezifiso ye-CNC kanye ne-CNC yokuvula lathes, yenza lula futhi ihlelise izinqubo zethu ze-CNC machining. Izinsizakalo zethu ezithuthukisiwe ze-CNC zokuvikela ngokushesha zihambisana namashejuli wokukhiqiza afunwa ngenkani ngenkathi zikwazi ukuphatha ukusebenza kwamaphrojekthi wokukhiqiza nokuchofoza ahlukahlukene adinga izinto ezikhethekile, izingxenye eziyinkimbinkimbi, kanye nokusebenza kahle kokukhiqiza.
Imishini emi-3-eksisi yemikhiqizo emifushane yokukhiqiza noma izingxenye ezilula, ukuguquguquka okungu-4, ama-5-axis we-CNC womsebenzi womshini wezingxenye ezenziwe ngomshini, kanye nokuhamba komsebenzi okwenziwe kahle kohlelo lweNC nendlela yethuluzi, konke kudlulela ngale kwama-setups wendabuko kanye nemikhuba yokwenza imishini, futhi kusiqinisekise ukuthi yenza imisebenzi eyinkimbinkimbi yokwenza imishini ngesikhathi. Funda kabanzi nge-prototyping yethu esheshayo ye-CNC, ungalayisha ifayela lamahhala le-CAD lapho.
Izingxenye Zomshini we-CNC Plastic
Yize ingekho incazelo eqondile yemishini yokunemba kwepulasitiki, siyiklama ngokwezifiso ngenkathi sikhiqiza ngokunembile nangokuphindaphindiwe izingxenye eziyinselelo ngokwe-geometry, ukubekezelelana okuphezulu, ukucaca kokukhanya kanye nokuqedwa okuhlukahlukene. Imishini yeplastiki ye-CNC yehluke kakhulu kunemishini yensimbi. Izinto ezehlukene ziza nezinselelo ezahlukahlukene, ngakho-ke kudinga indlela ehlukile maqondana nokukhethwa kwamathuluzi, ukusebenzisa imingcele, namasu wokugaya athuthukile.
Ukuhlangabezana nalezi zindinganiso kudinga imishini ephezulu, nemishini yokusebenza ephezulu, amathuluzi kanye nabasiki, ukwenza kahle nokusebenza, isipiliyoni kanye nesiko lokwamukela kuphela ikhwalithi ephezulu kakhulu. Kuzo zonke izinqubo zemishini siphinde sihlole inqubo yonke yokuhlola ukwenza ikhwalithi yakhelwe futhi igcinwe kuzo zonke izici. Singabantu ochwepheshe anhlobonhlobo amasu nezindlela ngokwezifiso machining plastic.
Ngaphandle kokuhlangenwe nakho okucebile kokuchofoza izingxenye zepulasitiki, i-Createproto iphinde inikeze insizakalo yemishini yensimbi ye-CNC ehlangabezana nanoma yiziphi izinkomba zokuklanywa eziyinkimbinkimbi. Ifaka phakathi ukujika, ukugaya, ukubhola nokuthepha izinto zensimbi ezahlukahlukene.
Izingxenye eziningi zensimbi ye-CNC zenziwe ngamamaki ahlukahlukene e-aluminium, i-magnesium alloy, i-zinc alloy, i-carbon steel, insimbi engagqwali, ithusi noma ithusi. Ezinye izinsimbi zinezici, ezinjengokhiye abayizikwele abayisikwele, kungaba nzima ukuzisebenzisa futhi kungafaka ukusetshenziswa kwe-EDM noma i-wire EDM.
Sihlaziya ukwakheka kwakho futhi sifake noma yimaphi amasu akhethekile we-fixturing nemishini asetshenziselwa ukukhiqiza izingxenye zakho ngemali ebiza kakhulu. Siyakwazi ukwenza imisebenzi yesibili efana ne-anodizing, ukupenda, ukumboza i-powder, ukwelashwa ngokushisa, ukuqhumisa isihlabathi nokupholisha. Ubuso bethu buqeda izingxenye ze-CNC ukusekela injongo yobuhle engasusa amamaki wethuluzi.
5-Axis CNC Milling Amandla
Lapho kukhulunywa ngomshini ojwayelekile we-5-eksisi, kubhekiswa kunombolo yezikhombisi lapho ithuluzi lokusika lingahamba khona, ukuthi ngemuva kokusetha ithuluzi lokusika lihamba linqamule ama-axes we-X, Y no-Z futhi lizungeze kuma-axes A no-B, ngasikhathi sinye Milling futhi machining, futhi eliphezulu ebusweni ngomshini sekugcineni. Lokhu kuvumela izingxenye eziyinkimbinkimbi noma eziyinkimbinkimbi noma izingxenye ezinamacala amaningi zingacutshungulwa kuze kufike ezinhlangothini ezinhlanu zengxenye kusethaphu eyodwa. Lokhu kusekela onjiniyela bokuklama ukuklama izingxenye ezixubile ezinokubekezelelana okuqinile okungakhulisa ukusebenza nokusebenza komkhiqizo wokugcina ngaphandle kwenqubo enomkhawulo.
Njengoba izingxenye eziningi ezikhiqizwa ezitolo zesibonelo zidinga imishini emaceleni ayisihlanu, izinsizakalo zokugaya kanye nemishini ye-5-axis zifunwa kakhulu kwezicelo ezahlukahlukene ezimbonini ezahlukahlukene kubandakanya imboni ye-aerospace, imboni ye-steamer, imoto evala izimboni kanye nezimboni zokukhiqiza amandla . Izinzuzo zemishini zibandakanya ukuqeda okuphezulu kwekhwalithi ephezulu, ukubeka ngokunemba, nesikhathi esifushane sokuhola ngenkathi kwakhiwa onqenqemeni olukhulu lwamathuba amasha ebhizinisi.
Izinzuzo ze-5-axis CNC milling
Ukuqedwa kwekhwalithi ephezulu: Kuyenzeka ukukhiqiza izingxenye ezisezingeni eliphakeme ezenziwe ngomshini kusetshenziswa abasiki abafushane abanejubane lokusika eliphakeme, elinganciphisa ukudlidliza okwenzeka kaningi lapho kusetshenzwa izimbotshana ezijulile ngenqubo eyi-3-axis. Kwenza bushelelezi ebusweni sekugcineni emva machining.
Ukubeka isikhundla ngokunemba: 5-eksisi milling kanyekanye machining isibe ezibalulekile uma imikhiqizo yakho siphelile kumele banamathele izinga esiqinile kanye nokusebenza standard. I-5-axis CNC machining nayo iqeda isidingo sokuhambisa isiqeshana somsebenzi phakathi kwezindawo zokusebenzela eziningi, ngaleyo ndlela kuncishiswe ubungozi bephutha.
Izikhathi ezimfushane zokuhola: Amandla athuthukisiwe omshini womshini o-5-eksisi aholela ezikhathini ezinciphile zokukhiqiza, ezihumusha zibe yizikhathi ezimfushane zokuhola zokukhiqiza uma kuqhathaniswa nomshini we-3-axis.
I-CNC Machining Yesivinini Esiphansi
Imishini esezingeni eliphansi ye-CNC machining iyisengezo esisodwa phakathi kokukhiqiza nokukhiqiza ngobuningi, kuhle kuhloselwe ukuhleleka komkhondo nokuhlolwa kokumaketha. Ukukhiqiza ngamanani aphansi emishinini ye-CNC kubuye kube yisisombululo esihle sokuhlola sohlelo oluzayo lokukhiqiza inqwaba. Ngokuya ngalesi sizathu, izinkampani eziningi ngokwengeziwe zinquma ukusebenzisa ukukhiqizwa kwevolumu ephansi ngoba ithola imikhiqizo emakethe isheshe. Ngasikhathi sinye, futhi kungakha indawo eningi yokwenza ngcono kumikhiqizo ngokuya ngempendulo yokusetshenziswa.
Kusukela prototype okusheshayo ekukhiqizeni ongaphakeme-ivolumu, lesi sigaba isibe umkhuba ukuthuthukiswa CNC machining izimboni namuhla. Ayikwazi nje ukuthuthukisa ngokushesha amakhono emishini yabakhiqizi abaningi, kepha futhi inciphisa ubungozi ekusetshenzisweni kokuguquguquka kokuklama futhi konga isikhathi nezindleko ezikhiqizwayo.
Ukuhlanganiswa kwemishini ephezulu kanye nolwazi olungenakuqhathaniswa nesipiliyoni samalungu eqembu lethu kusinikeza onqenqemeni olukhulu lwamanani amafushane okukhiqiza.
Sekuyiminyaka eminingi, Sikhonze amakhasimende avela ezimbonini ezahlukahlukene ngokukhiqiza ikhwalithi ephezulu, izingxenye zokugaya ngokunemba. Sinikezela ngezinsizakalo zombili zokukhiqiza ze-CNC kanye nezinsizakalo eziphansi zokusebenzisa imishini ngobuchwepheshe bethu bobuchwepheshe.
Siyizinsizakalo zakho zokumisa kanye e-China kuzo zonke izinhlelo zakho zemishini. Noma ngabe udinga izingxenye ezilula, izinto eziyinkimbinkimbi noma izingxenye ezahlukahlukene, i-Createproto imile kuwe ukuphatha noma yikuphi ukuxuba kwezingxenye nevolumu.
Amandla we-CreateProto we-CNC Machining Services
I-CreateProto ineqembu lokukhiqiza le-CNC lonjiniyela abangochwepheshe nama-machinists ukunciphisa ukukhiqizwa komsebenzi, ukwenza ngcono uhlelo lwe-CNC, ukunciphisa isikhathi semishini, ukwenza ngcono indawo, ngaleyo ndlela singaqinisekisa ukuthi izingxenye zenziwe ngomshini ophuma nemiphumela emihle kakhulu yomkhiqizo, ithimba lethu lokukhiqiza lilandela ngokuphelele indinganiso eqinile uma kukhulunywa ngekhwalithi nokunaka imininingwane.
I-state-of-the-art 3-axis kanye ne-5-axis imishini ye-CNC isekela iqembu ukuthi ligijime ngokushesha kwe-CNC machining plastic kanye ne-CNC izinsimbi zisebenza ngokuhlukile futhi ngokushesha, zonke izingxenye zenziwa ezikhungweni zethu eziphethwe ngokuphelele, sinikeze ukulawula okuphelele kusuka kumklamo wokwenza inqubo yethu ye-CNC machining.
Imishini ye-CNC ingenye yezinqubo ezibucayi kakhulu ekukhiqizeni, kusukela ekubambeni kokukhiqiza kuya ezingxenyeni zezimoto ne-aerospace. Njengoba enelise amaklayenti ahlukahlukene kuzo zonke izimboni, i-CreateProto ithole ulwazi olukhulu nolwazi olubanzi lokuthi zenziwa kanjani izingxenye ngqo njengalokho okuceliwe yikhasimende, futhi yaqonda ukubaluleka kokulethwa kwesikhathi. Kwa-CreateProto, ungathola ukusetshenzwa kwe-CNC ngomshini wezinsuku zebhizinisi eziyi-3-9.
Lokho ongakuboni akunandaba, kwa-CreateProto, akugcini nje ngokuthi sikhiqize izingxenye ezisezingeni eliphakeme, kepha futhi sinezinsizakusebenza ze-CNC zokunikeza ukuphathwa kwephrojekthi kumakhasimende ethu, sinikeze izeluleko ezifanele mayelana nokuklanywa kokukhiqiza, ukusiza umklamo wakho uphumelele isigaba sokuqala. Ithimba lethu lokuphatha iphrojekthi lihamba phambili emhlabeni. Ukulawulwa okuphelele kokwakhiwa nokukhiqizwa kusho ukuthi munye kuphela umthombo wokuphendula. Awudingi ukuya emafemini amaningi ukuthola usizo oludingayo. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwethu lokunakekelwa kwamakhasimende okuphela kokunye lusekela ithimba lethu lokukhiqiza ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wabo kahle nangendlela efanele. Uma unenkinga ethile, siyayilungisa.
Tolerances & Izinto CNC Machining Tolerances
Ukubekezelelana okujwayelekile kwe-Createproto kusetshenziswa ku-DIN-ISO-2768 (okuphakathi) kupulasitiki owenziwe ngomshini kanye ne-DIN-ISO-2768 (emihle) yezinsimbi ezakhiwe ngomshini. Imvamisa, singabamba ukubekezelelana kwemishini kusuka ku- +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) kuye ku- +/- 0.002" (+/- 0.05mm). Izici zengxenye zinconyiwe ukuthi zibe mkhulu kuno-0.02 "(0.5mm) kuzo zonke izifunda futhi ubukhulu bencenye yokuqokelwa ngaphezu kuka-0.04" (1.0mm) buyadingeka. Uma kudingeka ukubekezelelana okuqinile, ulwazi kufanele ludluliselwe ekutheni yiziphi izilinganiso ezidinga ububanzi obuncane, ukubekezelelana kwejometri ngokuphelele kungasetshenziswa kumdwebo wale ngxenye. Ukubekezelelana kuthinteka kakhulu yingxenye yejiyometri nohlobo lwezinto ezibonakalayo. Abaphathi bephrojekthi yethu bazobonisana nawe kuzo zonke izingxenye zephrojekthi yakho futhi bazohlinzeka ngezinga eliphakeme kakhulu lokunemba okungenzeka. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukubekezelelana okuqinile kungaholela ezindlekweni ezengeziwe ngenxa yokwanda kwezibi, ukulungiswa okungeziwe, kanye / noma amathuluzi wokulinganisa akhethekile. Indlela engcono yokufaka ukubekezelelana ukusebenzisa kuphela ukubekezelelana okuqinile kanye / noma kwejometri ezindaweni ezibucayi, ezizosiza ukunciphisa izindleko.
CNC Machining Material Ukukhethwa
I-ABS - (Yemvelo / Emnyama / I-Flame Retardant)
Ukuhlanganiswa kwe-ABS / PC
PC / Polycarbonate - (Sula / Mnyama)
PMMA / Acrylic - (Sula / Mnyama)
PA / Inayiloni - (Yemvelo / Emnyama / 30% GF)
I-PP / Polypropylene - (Yemvelo / Emnyama / 20% GF)
I-POM / Acetal / Delrin - (Mnyama / Mhlophe)
I-Epoxy Tooling Board
I-Aluminium - (6061/6063/7075/5052…)
Izinzuzo & Izicelo
Izinzuzo ze-CNC Machining
Ukukhethwa okubanzi kwezinto, asikho isidingo sokuyekethisa ngezinto ezingavuthiwe ngoba izingxenye zingafakwa i-CNC ngomshini ngqo kuplastikhi wobunjiniyela nezinsimbi.
Ukunemba okuphezulu futhi okuphindwayo, imishini ye-CNC ivumela ukunemba okuphezulu nokuqedela okuhle kakhulu kwendawo kanye / noma imininingwane.
Ukuguqulwa okusheshayo, imishini ye-CNC ingasetshenziswa amahora angama-24 ngosuku ngokuqhubekayo, kuphela ivaliwe ukulungiswa.
Ezomnotho ngokusebenza okufishane kwezingxenye zokukhiqiza ezidinga imisebenzi eminingi okufanele yenziwe. Amanani angahlukeki kusuka kokunye kuya ku-100,000.
Ama-prototypes ngokuvamile izingxenye ezinkulu nezinkulu akonga ngokwe-CNC prototyping uma kuqhathaniswa nezinqubo zokuprotyping ezisheshayo ngoba iningi lezinto zokuthengisa ze-RP ziyabiza.
Prototype Machining Izicelo
Amamodeli Wokubuka (Umqondo noma Umbukiso)
Ama-Prototypes Wokukhiqiza-Ibanga lepulasitiki
Prototyping Izingxenye Oversized
Amamodeli Wokufunda Emakethe
Umhlahlandlela Wokukhetha Izinto
Umhlahlandlela Wokukhethwa Kwezobuchwepheshe
I-CREATEPROTO UHLELO OLUSHESHILE LIMITED
I-ISO 9001: 2015 KUQINISEKILE
Rapid Prototyping Futhi Ukukhiqiza, Ukuvikela okusheshayo, Izinsizakalo Zokuphrinta Nezokushesha ze-3d, Ukuvikeleka Ngokushesha, Cnc Prototyping, Cnc Rapid Prototyping,
Bhalisela ukuthola ukukhiqizwa nezibuyekezo!